नारी दिवस विशेष: फुङलिङबाट एउटा टिकट- फिचर - कान्तिपुर समाचार
नारी दिवस विशेष: फुङलिङबाट एउटा टिकट
फाल्गुन २४, २०७४ देवेन्द्र भट्टराई
काठमाडौँ — ललितपुरको सानेपावासी पूर्णकला लिम्बूकी ३ वर्षीया छोरी भर्खरै प्लेग्रुपमा भर्ना भएकी छन् । पूर्णकला यतिखेर दोस्रो सन्तान जन्माउने तरखरमा छिन् ।
हुलाक सेवा विभागमा प्राविधिक कर्मचारी भएकाले टिकट डिजाइनदेखि ग्राफिक्सका कामहरू पनि टेबलमा उत्तिकै थाँती छन् । तैपनि घर, अफिस, बजार, आफन्त, चाडवाड सबैतिरको भागबण्डामाझ पूर्णकला कुदिरहेकै छन् ।
सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको चाँगेमा जन्मिएकी पूर्णकला लिम्बूको बाल्यकाल कुदाकुदमै बित्यो । ब्रिटिस लाहुरे परिवारमा जेठी छोरी भएपछि बाबुआमाको काखमा चेपिएर कहिले हङकङ, कहिले धरान, कहिले ब्रुनाई त कहिले फुङलिङ, चाँगे आउजाउ गरेरै उनको बाल्यकाल बित्यो । साथीभाइ, रमाइलो, लुकीछिपी गर्ने फुर्सदै पाइनन् उनले । काठमाडौंको बागमती बोर्डिङ स्कुलबाट २०५१ मा एसएलसी गरेपछि भने पूर्णकला पढाइ र बसाइमा केही स्थिर बनिन्, अघि बाल्यकालजस्तो ठाउँ न ठहर कुदिरहनु परेन ।
लिम्बू खलकमा कहींकतै नभएको सोख पूर्णकलामा थियो– पाखाबारी, पहाड, हिमाल, पाथीभरा, तमोर खोला, बाआमा अथवा सामुमा जे भेटिन्छ त्यसैको चित्र कोरिरहने गजबको स्वभाव । त्यसैलाई समातेर उनले क्याम्पस पढ्ने बेलामा आफ्नै रुचिमा कला क्याम्पसमा भर्ना भइन् ।
बीचमा देश–देशावर घुम्दै र नियमित नभएरै पनि फाइन आर्टमा स्नातक गरिन् । ‘आफ्नो कुलवंशमैं नपढेको (आर्ट) पढाइ र नगरेको कामको यो बाटो गलत थियो भन्नेहरू पनि थिए तर म लहडी बनेर कलाजगत्मै होमिएँ,’ पूर्णकला सम्झिन्छिन्, ‘मसँग अर्को सोख पनि थियो— ‘कपडा बुन्ने, ढाका/पस्मिना बुन्ने । बीचमा ढाका बुन्ने कामको प्रशिक्षक भएर काम गरेकी थिएँ । अझै पनि भित्री इच्छा भने कपडा डिजाइनिङमै छ ।’ पूर्णकलाका आमाबाबुले त एसएलसी फस्ट डिभिजनमा पास भएकी छोरीले साइन्स पढेर डाक्टर भइदिए हुन्थ्यो भनेर हत्ते हालेका थिए । तर, स्वभावमा मनमौजी छोरीका अगाडि बाआमाको केही जोड चलेन ।
‘कलाकला’ भन्दै एकरसको जिन्दगी बिताइरहेका बेला पूर्णकलाले एकजना कालिकोटे (सानेपावासी) आर्टिस्ट साथी भेटिन्, सन्तोष विष्ट । फाइन आर्टमा दुवैको रुचि मिल्यो । यही कारण मन पनि मिल्यो । फाइन आर्ट पढेर अरू साथीभाइजस्तै कतै ग्यालरी खोलेर अर्कै दुनियाँमा हराउने कि प्रदर्शनी गर्दै नामकाम देखाइरहने ? जीवनमा अन्योलता थियो नै ।
टेक्सटाइल डिजाइनिङमा एकदमै सोख थियो उनको । सपना पनि यस्तै कपडा/ढाकाको लघु उद्यमी बन्ने थियो । तर, उनै आर्टिस्ट साथी सन्तोषले दिएको सुझावमा पूर्णकलाले लोक सेवा पढ्ने र सरकारी जागिरे बन्ने सपना देख्न थालेकी थिइन् ।
‘लोक सेवा कुन चरीको नाम हो, मलाई थाहा थिएन,’ पूर्णकला सम्झिन्छिन्, ‘सन्तोषले दिएको सुझाव र ‘सरकारी कर्मचारी’ बन्ने सपनामा म लोक सेवाको दुनियाँमा लागिहालेँ ।’
पहिलो प्रयासमै पूर्णकला सरकारी जागिरे बनिन्, हुलाक सेवा विभागमा । २०६७ मंसिरदेखि कला अधिकृतका रूपमा हुलाकमा प्रवेश गरेकी पूर्णकलाले पाँच वर्षयता हुलाकबाट निस्कने सबै टिकटको डिजाइनिङ गर्दै आएकी छन् । यस बीचमा २ सयभन्दा बढी टिकटमा पूर्णकलाको नामकाम जोडिएको छ ।
‘सुन्दैमा ‘सरकारी’ भन्ने विशेषता हुन्छ, स्थायित्व पनि हुन्छ भनेर यतातिर लागेकी हुँ,’ पूर्णकला भन्छिन्, ‘पहिला पनि ढाका वा पस्मिना बुन्ने, कपडामा डिजाइन भर्ने र तालिम दिने काम गर्दै आएकी थिएँ । पछि यस्तो निजी सोख र एनजीओको काम भनेको ‘प्याकेज’ टाइपको मात्रै हुने रहेछ भन्ने बोध भयो ।’ निजी क्षेत्रको काम भनेको पैसा भएर पनिस्थिरता नहुने ठान्दै सरकारी जागिरे हुँदा परिवारलाई समय दिन सकिने र जीवनमा स्थिरता पनि आउने भनेर उनी सरकारी दुनियाँमा लागेकी रहिछन् ।
हुलाक सेवामा प्रवेश गर्नासाथ पूर्णकलालाई विशुद्ध फाइन आर्टको कुरा मात्रै थाहा थियो । प्लेसमेन्ट, कम्पोजिसन, स्पेसिफिकेसन, प्रिन्टिङ आदिको पत्तो थिएन । त्यस बेला वरिष्ठ कला अधिकृत मोहननरसिंह राना, केके कर्माचार्यले हुलाक टिकटको शैली र प्रक्रियामा ‘गाइड’ गरेका रहेछन् । तर पहिलेजस्तो विशुद्ध कलाका भरमा, आर्ट गरेरै टिकट डिजाइन तयार गर्ने जमाना अहिले नरहेकाले केही अर्थमा सजिलो युगमा पनि आएकी छन् पूर्णकला । ग्राफिक्स डिजाइनको सुविधाले छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिने अवसर उनले पाएकी छन् ।
‘एउटै काम, शैली, टिकट साइजको वरपर दिक्कै लाग्ने गरी ग्राफिक्समा घोत्लिरहँदा कहिलेकाहीँ ‘मोनोटोनस’ पनि हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, यो एकरीतको कामसँगै मुलुकको चिनारी जोडिने काम गर्न पाएकी छु भन्ने हुन्छ, अनि ढुक्क लाग्छ ।’
आर्टवर्क वा ग्राफिक्समा पनि कतिपय वनस्पति, संस्कृति, चाडपर्वसम्बन्धी काम भने निकै सजिलो लाग्ने गरेको रहेछ उनलाई । तर, व्यक्तिमालाको काममा भने हेरफेर भइरहने अवस्था आउने रहेछ । आफूले गरेका कामबारे बाहिरी बजारमा चियोचर्चा चल्ने गर्दा आफूले ध्यान दिएर सुन्ने गरेको पूर्णकला बताउँछिन् ।
‘जस्तो सुरुमा ‘सहिद’ भनेर निकालिएको रामप्रसाद राईको हुलाक टिकट छापिएर पनि उपयोगमा आएन । यस्तो गल्ती भेटिँदा भने हामी सबैले सचेत बन्नुपर्नेमा ध्यान बढी जान्छ । अहिले भने गृह मन्त्रालयबाट सहिदको सूची लिएर आएका छौँ, अब आइन्दा यस्तो गल्ती नहोस् भनेर,’ उनले सुनाइन्, ‘यसैगरी सहिद दुर्गानन्द झाको हातमा बम राखिएको टिकट आएपछिको चर्चा पनि मैले पढेकी छु । टिकटमा राखिने ‘स्पेसिफिकेसन’ आधारमा डिजाइनिङ उतारिने भएकाले विभाग, मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार काम भएजस्तो लाग्छ । यस्ता कुराहरू सार्वजनिक बहसमा नगए पनि मन्त्रालयभित्र र विज्ञहरूबीच बहस भएकै हुन्छ ।’
यदाकदा भने आफ्नो विवेक र अन्तरचेतनाले गरेको निर्णयले हुलाक टिकटमा पनि काम गर्न सक्ने पूर्णकलाको बुझाइ छ । जस्तो, सुरुमा हुलाक टिकटका लागि श्री ३ प्रधानमन्त्री देवशमशेरको श्रीपेच लगाएको फोटो आएको रहेछ, पछि मन्त्रालयभित्रको बहस र डिजाइनरको सुझावमा समेत श्रीपेच नलगाएको फोटोमा टिकट निकालिएको रहेछ । ‘हुलाक टिकट छाप्ने क्रममा मैले पनि सुझाव दिने गरेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘कालिकोटको पचाल झरना, पर्वत–बाग्लुङ जोड्ने झोलुंगे पुल, बुद्धको थाङ्का चित्र, लुम्बिनी पिस म्याराथन, पश्चिम नेपालमा पाइने लोपोन्मुख चरा खरमजूर, तेह्रथुमको हयाथु्रङ झरना आदिको टिकट निकाल्न मैले सिफारिस गरेकी थिएँ ।’
आफ्नो जाति, वर्ग र समुदायको हकहितमा निकै सचेत पूर्णकलालाई आफ्नै लिम्बू भाषामा संवाद गर्न मुस्किल पर्ने रहेछ । सानैदेखि गौंथली चरीझैं गुँड फेर्दै यताउता चहारिरहनुपर्दा भाषामा उनी बहुभाषिक बनेकी रहिछन्, मातृभाषीभन्दा पनि । घरजम पनि उनै मन मिल्ने कलाकार सन्तोष विष्टसँग गरेकी रहिछन् । ‘एउटी महिलालाई पुरुष हेरीकन हरेक कामकाजमा अप्ठयारो त छ नै,’ उनी भन्छिन्, ‘आफ्नै सेवाको कुरा गर्दा, पनि म विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्रकी कर्मचारी परेँ । कतिपय प्रशासनिक कुरा थाहा नहुँदा अथवा थाहा नदिँइदा धेरै कुरा बुझ्नै गाह्रो भइरहेको हुन्छ ।’
आफ्नै बलबुता र प्रयत्नमा यो चिनारीयुक्त ठाउँमा आइपुगेकै हुनाले पूर्णकला ‘आरक्षण’ भन्दैमा कसैले टिपेर ल्याएर कहीँकतै राख्ने पद्धतिको विरोधी रहिछन् । ‘आरक्षण भनेर मात्रै हुँदैन, आफू पनि सक्षम हुनैपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकारको प्रशस्त सुविधा हुनैपर्छ । तर, आरक्षण मात्रै भनेर हुँदैनजस्तो लाग्छ । तर, एकोहोरो नाराले मात्रै न जीवन चल्छ, न समाज नै ।’
उनले महिलाहरू आफैं सचेत नभई अरूको कुरा मात्रै गर्ने होइन, सकारात्मक सोच राखेर आफैं अग्रसर हुनुपर्ने अनुभव सुनाइन् । नेपाली समाजमा र विशेषत: महिलामाझ पनि ‘अधिकार’ भनेर सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग गर्ने ‘ट्रेन्ड’ आफूले देखेकोमा पूर्णकला यसमा सुधार खोजिरहेकी थिइन् ।
कामकाजी महिला, अफिस, घर, आफन्तजन, नाता–कुटुम्ब सबैतिरको भागबण्डा मिलाउन पूर्णकलालाई सधैंजसो मुस्किल पर्ने गरेको छ । उनी विवाहपछि ताप्लेजुङ जान पाएकी छैनन् । श्रीमान् सन्तोषको कालिकोट पुस्तैनी घर जान पनि सकेकी छैनन् ।
‘यो जीवन पनि हुलाक टिकटजस्तै रहेछ,’ उनी सोचाइ बुझाइमा कविझैं पनि लाग्छिन्, ‘टिकटको खेस्रामा प्लेसमेन्ट, कम्पोजिसन, डिजाइनिङ चाहिएजस्तै जीवनमा पनि चाहिन्छ । विशेष अवस्थाजस्तै जसरी टिकट ‘रिप्रिन्ट’ मा आउँदैन नि, यो जीवन पनि यस्तै छ । एक पटकमा चाहे ५० हजार छापियोस् अथवा ५ लाख, टिकट एकैपटक मात्रै छापिन्छ । जीवन पनि एकबारको हो, जे–जस्तो कम्पोजिसन मिलाउन सक्यो, त्यस्तै मात्रै ।’
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ ०७:४९
नारी दिवस विशेष: “महिला–पुरुष प्रतिस्पर्धी हैनन्”
फाल्गुन २४, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — नारी दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले चित्रकार रागिनी उपाध्याय, रंगकर्मी निशा शर्मा र अभिनेत्री केकी अधिकारीसँग उनीहरुले कसरी नारी दिवस मनाउँदैछन् भनेर कुराकानी गरेका थियौं । त्यही कुराकानीको सम्पादित अंश :
नारी दिवसमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
रागिनी : दिवस मनाउनुभन्दा पनि नारी अधिकारलाई व्यवहारमा उर्तानुपर्छ भन्ने लाग्छ । यद्यपि आजैको दिन म समाजसेवी भद्रकुमारी घलेलाई सम्मान गर्दै छु । उहाँले आफ्नो सारा जीवन समाज सेवामा लगाउनुभयो, हामी कलाकारकी आमा भएर पनि लागिरहनुभएकै छ ।
निशा : म महिलावादी होइन, कलाकार हुँ । महिला दिवस मनाउँदिनँ । दिवस मनाएर केही हुन्छजस्तो पनि लाग्दैन । महिलाको हित वा नारी अधिकारको पक्षमा काम गर्न दिवस कुनुपर्दैन ।
केकी : दिवस नै त मनाउदिनँ । तर, मलाई प्रेरणा दिने र लैंगिक समानताको पक्षमा काम गर्ने विश्वका सारा मानिसप्रति आभार प्रकट गर्छु । मलाई आज नारी अधिकारबारे जानकारी नै नभएकाहरूको सम्झना आइरहेको छ । उहाँहरू अवस्थालाई माथि उठाउन जरुरी छ ।
नारी अधिकारलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
रागिनी : पुरुषकै जस्तो अधिकार हो । महिला–पुरुष बराबर हुन् । पुरुषले जन्मसिद्ध पाएका अधिकार महिलाले मुद्दा–मामिला, अड्डा–अदालत धाएर पनि पाइरहेका छैनन् । सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा पुरुषले एकलौटी हक जमाइरहेका छन् । छोरीले वंश राख्दैनन् भन्ने गरिन्छ । वंश त कर्मले निर्धारण गर्ने कुरा हो । भगवान् शिवको अर्धनारीश्वरझैं महिला–पुरुष आधा–आधा हुन् ।
निशा : यो भनेको समानता हो । महिला र पुरुषले एकअर्कालाई सम्मान गर्नु वा बराबर महसुस गराउनु नै एकअर्काको अधिकारको रक्षा गर्नु हो । प्रकृतिले हामीलाई अलग–अलग बनाएका छन् । हामी एक होइनौं । हाम्रा आ–आफ्नै सबल र दुर्बल पक्ष छन् । आधा–आधा मिलेर मात्रै हामी पूर्ण बन्नुपर्छ । त्यही भएर समानता जरुरी छ ।
केकी : नारी अधिकार भनेको लैंगिक समानता हो । महिलाले पुरुषसरह अवसर पाउने प्रबन्ध हो । अधिकारको सवालमा सबै समान हुन्छन् । जो अधिकारबाट वञ्चित छ, उसले न्याय पाउनुपर्छ । तर, म आरक्षणको विरोधी हुँ । मान्छेले आफ्नो क्षमताअनुसार स्थान बनाउँछ ।
शिक्षा, स्वास्थ, चेतना स्तरमा नेपाली महिलाको स्थिति कहाँ पुगेजस्तो लाग्छ ?
रागिनी : पहिलेको दाँजोमा महिलाको अवस्था सुधारिएको छ । तर, समान अधिकारको कुरा धेरै पर छ । सोचमा परिवर्तन आएको छैन । सरकारले बराबर अधिकारको पक्षमा कानुन बनाए पनि व्यवहारमा असन्तुलन छ । भर्खरै चुनाव सकियो तर मुख्यमन्त्रीमा कति महिला निर्वाचित भए ? राजनीति, ब्युरोक्रेसीमा महिला तल्लो तहमा मात्रै छन् । शिक्षामा संख्या बढेको छ । चेतना स्तर पनि । तर, यतिले पुग्दैन ।
निशा : शैक्षिक स्तर बढेको छ, स्वास्थ्य स्थिति सुध्रिएको छ । चेतना स्तर पनि फराकिलो भएकै हो । तर, अर्धज्ञानले हामीलाई कमजोर बनाएको छ । महिला अधिकारको नाममा लड्नेहरूकै परिवार भताभुंग भएको छ । डिभोर्स रेट बढेको छ । पुरुषले प्यान्ट लगायो, ब्वाइज कट कपाल काट्यो, मध्यरातमा घर आयो भनेर महिलाहरू पनि उसै गर्न खोज्छन् । तीभन्दा के कम भन्ने खालको प्रतिस्पर्धी भावना जागेको छ । महिला–पुरुष प्रतिस्पर्धी होइनन् नि ।
केकी : हाम्रो समग्र अवस्था विकासोन्मुख छ । सबै पाटोमा हामी सुध्रिँदै, परिष्कृत हुँदै, जान्दै/बुझदै् गइरहेका छौँ । समाज र सोच एकैचोटि परिवर्तन हुँदैन । जेन्डर इक्वालिटीको कुरा धेरैले बुझ्न थालेको पाउँछु । महिलाका आवाज सुनिन थालेका छन् । यसपालि मिटु अभियानमार्फत कतिले आफ्ना दबिएका कुरा, कालो इतिहास सेयर गरे । आफ्ना कुरा राख्न सक्ने शक्ति नेपाली महिलामा पनि आएको छ ।
तपाईंले आम महिलाको पक्षमा के गर्नुभएको छ वाके गर्न सक्नुहुन्छ ?
रागिनी : म कुलपति रहेको नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पहिला १८ प्रतिशत मात्र महिला थिए । अहिले प्राज्ञ परिषद् र सभामा गरी ३० देखि ४० प्रतिशत हुनुहुन्छ । यसलाई म उपलब्धि मान्छु । हुन त मलाई काम गर्न सहज छैन, धेरै चुनौती झेलिरहेकी छु । मजस्तो फाइटर महिलालाई त गाह्रो छ भने अरूको हालत कस्तो होला ? हामीले घरदेखि नै लडाइँ सुरु गर्नुपर्छ । परिवार, समाज, कार्यालय र देशसँगै भिड्नुपर्छ ।
निशा : काउन्सिलिङ गर्न सक्छु । नाटकमार्फत चेतना फैलाउन सक्छु । सही ज्ञान बाँड्न सक्छु । यस्तो गर्दै पनि आएकी छु ।
केकी : अरूका लागि गर्ने त छँदै छन्, पहिले आफ्नै लागि केही गर्न सकियो भने त्यो ठूलो कुरा हुन्छ । मैले कसैसँग झुकेर वा दबिएर काम गरिनँ भने यो अरूका लागि पनि प्रेरणा बन्छ । सबैले आफूलाई बलियो बनाउँदै लगे समाज धेरै हदसम्म अनुशासित हुन्छ । समाजका लागि काम गर्नेहरू एकातिर हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आम मानिसका पक्षमा बोल्नुहोला । मैले अभिनेत्रीका रूपमा महिला केन्द्रित वा समान अधिकारसम्बन्धी फिल्म खेलेर जानकारी फैलाउने काम गर्न सक्छु ।
घरेलु हिंसा, बलात्कारका घटनामा कमी नआउनुको कारणके होला ?
रागिनी : बालमनोविज्ञान बिग्रेको मानिसले पछि गएर अपराध गर्न सक्छ । सानोमा माया, ममता, सत्कार नपाएको बच्चा ठूलो भएपछि हिंस्रक बन्ने खतरा हुन्छ । राम्रो शिक्षा पाएकाहरू त्यस्तो गर्दैनन् । त्यसकारण स्कुल स्तरदेखि नै यौन शिक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्छ । मिडिया र सरकारले चेतना फैलाउने काम गर्नुपर्छ । महिला पछि परेको पनि शिक्षाकै कमीले हो ।
निशा : पढाइ भनेको किताबी ज्ञान मात्र होइन । पढेको छ तर राम्रो–नराम्रो छुट्याउन सक्दैन भने ऊ ज्ञानी भएन । मान्छेले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबोध गर्न सक्यो भने मात्रै अपराध घट्छ । हाम्रो शिक्षा शैली बलियो छैन । पढेकाहरू नै जेब्रा क्रसिङमा गाडी/बाइक रोक्दैनन्, पैदल यात्रुलाई उछिनेर कुद्छन् । ती ज्ञानी भए त ? अर्को कुरा, कानुन कमजोर भएपछि अपराधीको मनोबल बढ्छ । अहिले इन्टरनेटले पनि मान्छेलाई अपराधी बनाइरहेको छ ।
केकी : यस्ता अपराध पहिले पनि हुन्थे, भनौँ झन् धेरै हुन्थे होलान् । त्यो बेला यसलाई लुकाइन्थ्यो । इज्जतको डरले महिलालाई बोल्न दिइन्थेन । महिला डराउँथे । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । महिलाहरू बोल्न थालेका छन् । असल र प्रभावकारी शिक्षाले यसलाई रोक्न सक्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७४ ०७:४७
जाँगरिली ७४ वर्षीया सुशीला
रङको बढ्दो व्यापार
'कच्चा पदार्थलाई तयारी भनिदिने ?'
डेढअक्कलले कुरूप सहर